MR MRT: သူခိုးမှတ်စု
ပီကာဆို၏ လက်ရာ ဖြစ်သည်။ အေသင် အမျိုးသား ပြတိုက်သို့ ပီကာဆို ကိုယ်တိုင် ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့သည့် "အမျိုးသမီး၏ ဦးခေါင်း" အမည်ရှိ ပန်းချီကား ဖြစ်သည်။ နာဇီဂျာမဏီကို ခုခံတိုက်ခိုက်ခြင်းကို အသိအမှတ်ပြုသည့် အနေဖြင့် ၁၉၄၉-ခုနှစ်က ဂရိနိုင်ငံသို့ ပေးအပ်ခဲ့သော ပန်းချီကား ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ပန်းချီးကားသည် တစ်ခြား အနုပညာလက်ရာ နှစ်ခုနှင့်အတူ တနင်္လာနေ့က အခိုးခံလိုက်ရသည် ဆို၏။ ဒေသစံတော်ချိန် ငါးနာရီ မတိုင်မီ ဖောက်ထွင်းခိုးယူမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ခုနစ်မိနစ်အတွင်း အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည် ဆို၏။ ပန်ချီးကား၏ တန်ဖိုးကို မဆုံးဖြတ်နိုင်သေးပေ။
အနုပညာကို မြတ်နိုး၍ ယူခြင်းမဟုတ်ဘဲ အနုပညာ၏ နောက်ကွယ်မှ ငွေကြေးကို ခိုးယူခြင်း ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
ဗုဒ္ဓစာပေ ၀ိနည်းကျမ်းစာများ၌ ခိုးနည်းအမျိုးမျိုး တွေ့ရသည်။ အချို့သော ခိုးနည်းများမှာ ခိုးမှန်း သိသာ၏။ မလိမ့်တပတ် ခိုးနည်းများလည်း ပါဝင်သည်။ အချို့သော ခိုးနည်းများဖြင့် ခိုးမှန်းမသိ ခိုးလိုက်မိတတ်၏။ မသိမသာ သူခိုး ဖြစ်သွားတတ်သည်။ သတိမူစရာ ကောင်းလှ၏။
- မတရား အမှုဆင်၍ သူတစ်ပါး၏ သက်ရှိသက်မဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အနိုင်ထက် ယူခြင်း၊
- ခြံမြေအပိုရအောင် နယ်ခြားမှတ်တိုင် ပြောင်း၍ စိုက်ထူခြင်း၊
- သူတစ်ပါး သယ်ဆောင်လာသည့် ပစ္စည်းကို ရလို၍ လိမ်ညာပြောဆို စွပ်စွဲကာ ပစ္စည်းကို အချခိုင်းခြင်း၊
- သူတစ်ပါး သယ်ဆောင်လာသည့် ပစ္စည်းကို သယ်ယူသူနှင့်တကွ သမ်းပိုက်ခြင်း၊
- သူတစ်ပါး အပ်နှံထားသည့် ပစ္စည်းကို မအပ်ခဲ့ပါဟု ငြင်းခြင်း၊ သို့မဟုတ် ပြန်မပေးနိုင်ကြောင်း လှည့်ပတ်ပြောခြင်း၊
- ပစ္စည်း တစ်ခုခုကို ခိုးလိုစိတ်ဖြင့် မူလနေရာမှ ရွေ့စေခြင်း၊ နေရာပြောင်းခြင်း၊
- ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို နောက်မှယူမည်ဟု စိတ်ကူး၍ တစ်ခုခုဖြင့် ဖုံးအုပ်ကာကွယ်ခဲ့ခြင်း၊
- ပစ္စည်းများ အခွန်ကောက်သည့် နေရာဌာနကို ရှောင်ကွင်း၍ ပစ္စည်း သယ်ယူခြင်း၊ အခွန်ရှောင်ခြင်း၊
- မမှန်ကန်သည့် ချိန်ခွင်, အလေး, တင်းတောင်း စသည်ကို အသုံးပြု၍ မတရား ရောင်းဝယ်ခြင်း၊
- အဖွဲ့အစုနှင့် ခိုးကြရန် သဘောတူ တိုင်ပင်ထားပြီး လက်တွေ့ခိုးသောအခါ မပါဝင်ခြင်း၊
- သူတစ်ပါးကို အခိုးခိုင်းခြင်း၊
- အခွင့်သာချိန်မှာ ခိုးခဲ့ပါဟု သူတစ်ပါးကို အမိန့်ပေးခဲ့ခြင်း၊
- ဓားပြတိုက်ခြင်း၊ အာဏာဖြင့် မတရား သိမ်းပိုက်ခြင်း၊
- မဲချရာ၌ မဲကောင်းရအောင် မတရားလုပ်ခြင်း၊
- သူတစ်ပါးပိုင် ပစ္စည်းကို ကိုယ့်ပစ္စည်းဖြစ်အောင် ကိုယ့်တံဆိပ်၊ ကိုယ့်နာမည် ပြောင်းတပ်ခြင်း
- အမေ့ အဟန့်စသော ပညာကိုသုံး၍ ခိုးခြင်း၊
- တန်ခိုးဖြင့် ခိုးယူခြင်း . . . စသည်။
ယနေ့ခေတ်၌ အနုပညာကို ခိုးယူခြင်း၊ အတတ်ပညာကို ခိုးယူခြင်းများကိုလည်း တားမြစ်ထား၏။ သူတစ်ပါးဖန်တီးထားသည့် စာပေ အစရှိသော အနုပညာ လက်ရာများကို မိမိ ဖန်တီးထားလေဟန် မရိုးမသား မပြုမူရဟု တားမြစ်ထားသည်။ သူတစ်ပါး တီထွင်၍ ထုတ်လုပ်ရာင်းချသည့် အပျော့ထည် အမာထည် နည်းပညာ ပစ္စည်းများကို မ၀ယ်ယူဘဲ ခိုး၍ အသုံးမပြုရန် တားမြစ်သည်။
ကိုင်တွယ်သုံးသပ်နိုင်သည့် သက်ရှိသက်မဲ့ ပစ္စည်းများ ခိုးယူခြင်း၏ အထင်ရှားဆုံး ဆိုးကျိုးမှာ ဆင်းရဲမွဲတေခြင်း၊ အငတ်ငတ် အပြတ်ပြတ် မပြည့်မစုံ ဖြစ်ခြင်းဟု ဘုရားရှင် ဟောတော်မူခဲ့၏။ မကိုင်တွယ် မသုံးသပ်နိုင်သည့် စာပေစသော အနုပညာများ၊ တီထွင်ဖန်တီးမှု နည်းနာများကို ခိုးယူခြင်း၏ ဆိုးကျိုးမှာ ဥာဏ်ထိုင်းခြင်း၊ တီထွင်ဥာဏ်ကန်းခြင်း၊ ဥာဏ်ရူးခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်နိုင်၏။
အပြစ်မသိသူ၊ အပြစ်မကြောက်သူတို့ မည်သို့ပင် ခိုးကြစေကာမူ လူလိမ္မာတို့ ခိုးမှုမှ ရှောင်သင့်၏။
Posted by Ashin Acara. at 6:42 PM